Ulaha zucchini oo la dubay oo leh suugo caano fadhi ah | Bezzia
Ulaha zucchini ee la dubay oo leh maraqa yogurt
Maria vazquez | 08/05/2022 10:00 | Saladyada iyo khudradda
Ma waxaad raadineysaa a qani, iftiin iyo soo jeedin caafimaad leh maxaa la keenayaa miiskaaga? Ulaha zucchini ee la dubay oo leh suugo caano fadhi ah waa. Ku fiican in ay u adeegaan bilow ama casho fudud, sidoo kale waa dhakhso oo fudud in la diyaariyo. Wax badan ma weydiin karno!
Furaha ulaha zucchini-kan ayaa ku jira buufinta. Duub ku ah waxaanu ku darnay uunsi, laakiin kuwaas oo aan ku dari lahayn kuwo kala duwan. Waana in haddii aad jeceshahay in aad u isticmaasho xawaash suxuuntaada waxaad heli doontaa beddelaad kale oo aad isku daydo.
Ulahan waanu shiili karaynay, laakiin aad bay u raaxaysan lahayd iyo nadiif ah si ay u sameeyaan iyaga foornada. Intaa waxaa dheer, waxaan sidaas ku badbaadineynaa xaddi badan oo baruur ah. Waxaan sidoo kale siinaa caan ka weyn zucchini kaas oo, habka, uu qof walba uga farxin doono sidan.
Wixii zucchini ah
4-5 qaado oo bur ah
1 qaado oo rootiga rootiga ah
1 qaado oo budada farmaajo ah
Qanjaris curry ah
Salt iyo basbaaska madow si ay u dhadhamaan
1 yogurt dabiici ah
Casiirka liinta badhkeed
Saliid saytuun ah oo bikro ah⠀
Iska yaree zucchini ulaha Dhererka 7 sentimitir iyo dhumucdiisuna waa 1 sentimitir, qiyaastii.
Ku garaac ukunta baaquli iyo ku qas weel kale inta kale ee maaddooyinka lagu diyaariyo buufinta.
Marka la sameeyo, Ukunta soo mar marka hore ka dibna iyada oo loo marayo isku dhafkan ulaha zucchini.
Sida aan iyaga ka dhigo aad aragto na saaraya saxaarada foornada Waa in aad hore u kululaysay ilaa 220ºC.
Dhamaad ku rid foornada 16-20 daqiiqo heerkulku waa 220°C.⠀
Ka faa'iideyso waqtigaas diyaarso maraqa isku darka caano fadhi, xabo iyo casiir leh qanjaruufo milix iyo basbaas ah. Ka dibna ku dar saytuun saytuun ah oo bikrad ah oo dheeraad ah.
Ku darso ulaha zucchini ee la dubay oo leh suugo caano fadhi ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Recipes » Saladyada iyo khudradda » Ulaha zucchini ee la dubay oo leh maraqa yogurt
Sida loo caawiyo dhallinta cillad cunto cunid
3 hormood oo masraxeed oo aan jeclaan lahayn inaan aragno